बुटवल ! टिकटक भिडियो समाचारको अन्तमा राखीएको छ !
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा एक महिलाको रह”स्यमय मृ’त्यु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–२ ड्राइभर टोल बस्ने २९ वर्षीया अमृता क्षेत्री टण्डनको रहस्यमय मृ’त्यु भएको हो ।
अमृता क्षेत्री टण्डन सोसल मिडिया टिकटकमा भिडियोहरु उपलोड गर्थिन् । उनको अन्तिम टिकटक भिडियोमा भनेकि छिन् “कसैले विश्वास टोड्यो भने उसलाई मन नदिनुहोस् किनकि उसैले त सिकाएको हो त्यसैले सोचेर मात्र विश्वास गर्नुहोस्” ।
उनको माइती पक्षले भने अमृताको ह त्या भएको आ”रोप लगाएको छ । बुधबार राति सवा १० बजे घरमै अमृताको श’व फेला परेको थियो ।अमृताको ह त्या भएको भन्दै माइती पक्षले प्रदर्शन गरेपछि प्र”हरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै श्रीमान् प्रेम टण्डनलाई प”क्राउ गरेको छ ।
अमृताको श’व पो,’स्टमा’र्टम गर्न बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पताल राखिएको छ । तर पो,’स्टमा’र्टम नभइसकेको जिल्ला प्र”हरी कार्यालयले जनाएको छ ।घरपरिवारले योजना बनाएर ह त्या गरेको अमृताका दाजु पुष्प खत्रीले आ”रोप लगाएका छन् ।
खत्रीका अनुसार पहिलादेखि नै घरायसी कामको विषयलाई लिएर घर पक्षले अमृतालाई ध’म्की दिने, झ’गडा गर्ने र हा’तपात गर्ने गरेका थिए ।बुधबार राती ९:३० बजे आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दाइ मलाई बचाउनुहोस्, मलाई यहाँबाट निकाल्न सहयोग गर्नुहोस् भन्दै एसएमएस गरेको समेत खत्रीले बताएका छन् ।
अमृताको ह”त्या भएको भन्दै बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ । प्र”हरी नायब उपरीक्षक पौडेलका अनुसार माइती पक्षले जा’हेरी पनि क’र्तव्य ज्या’नमा दिएका छन् । सो जाहेरी पनि दर्ता भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए ।
अमृता र प्रेम टण्डनको पाँच वर्ष अघि विवाह भएको थियो । पो,’स्टमा’र्टम रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै वि’ष से’वनबाट मृ’त्यु भएको हो वा के भएको हो भन्नेबारेमा थाहा हुने उनको भनाई छ । कर्तव्य ज्यानमा जाहेरी दिए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन प्रहरी प्रयासरत रहेको डिएसपी पौडेलले बताए ।
जिल्ला प्र”हरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले अनुसन्धानपछि मात्रै घ”टनाको वास्तविक विवरण पत्ता लाग्ने बताए । माइती पक्षले कार”बाहीको माग गर्दै प्रेमको घर घेराउ गरेपछि प्र”हरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।वि’ष सेवन गरी आ ”त्म ह””त्या गरेको सूचना प्र”हरीले राति पाएको थियो ।
सोही सूचनाका आधारमा इलाका प्र”हरी कार्यालय बुटवलबाट टोली खटिएको थियो । ‘किटनाशक वि’ष से’वन गरेको सूचना पाएपछि प्र”हरी घ””टनास्थल गएको थियो, यस विषयमा अनुसन्धान जारी छ, माइती पक्षले ह”त्या भएको भनिरहनुभएको छ,’ प्र”हरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भने । हेर्नुहोस उनका ति टिकटक भिडियोहरु
२०७९ बैशाख २६, सोमबार २२:३२0Minutes 385 Views